गृहपृष्ठ » अनौठो संसार » मानिसले सोच्ने वित्तिकै बच्चा बृद्ध-बृद्ध बच्चा हुने, चाहेको स्थानमा पुग्ने टाईम मेसिन बन्यो ?
काठमाडौं । हामी धेरै पढेका छौ की हाम्रा पुर्खा कस्ता थिए । त्यो स्वरुप र मस्तिष्कसम्मको विकास र परिवर्तन हेर्दा अहिलेपनि हामी चकित पर्छौ । तर वैज्ञानिकहरुले पत्ता लगाएको अर्को रहस्यले विश्वमा अहिले हलचल आइरहेको छ । तपाई केहीले टाइम ट्राभल अर्थात समयसँग यात्राका बारेमा केही सुन्नुभएको होला ?
यसमा केही फिल्महरु समेत बनेका छन् । अझ तपाई लाई बुझाउँन हामी हिन्दु धर्मका केही ग्रन्थमा भएका सत्यको सहारापनि लिन्छौ । भगवानहरु सोच्ने वित्तिकै कल्पना गरेको स्थानमा पुग्थे । त्यति मात्र हैन बालक हुँन चाहे बालक बन्थे । बृद्ध हुन चाहे तत्कालै बृद्ध बन्थे ।
हो विज्ञानले दावी गर्न थालेको अब विज्ञान र ज्ञानको पराक्रमका कारण अबका मानिसहरु त्यसरी नै टाईम ट्राभल अर्थात घडीको सुई अगाडी घुमाए भविष्यसम्मको यात्रा वा जीवन अहिले नै कटाउँन पाउँने पछाडी धकेली कटाइसकेको समयमा फेरी फर्किने । सुन्दा त तपाईलाई अनौठो लाग्न सक्छ ।
तर हामी यो निक्कै समयको अध्ययन र विभिन्न तथ्यमा आधारित रहेका सन्र्दभ सामाग्रीको विश्लेषणबाट यो भनिरहेका छौ । हुन त हामीले कल्पना गरेकै कुरा हो । हामी विगत वा भविष्यमा जान सक्छौँ ? धेरै लेखकहरू र वैज्ञानिकहरू पनि यस दिशातर्फ जान प्रयास गरिरहेका छन् । तर के यो सम्भव छ ? केहि चलचित्रहरुमा पनि त्यस्ता केहि दृश्यहरु पनि देखाइएको हुन्छ । आज हामी यो बारेमा प्रष्ट पार्नेछौ ।
आखिर, हामी मानिसको उत्पती र विकास कसरी भइरहेको छ । हामी मान्छे हाम्रो भविष्य के ? अबको भावी पुस्ता हामी जस्तो देखिनेछ ? हामी हाम्रा पुर्खाहरू भन्दा बिलकुल फरक छौ भने भावी पुस्ता हामी भन्दा विलकुल फरक हुन किन सक्दैन ? यी प्रश्नले बैज्ञानिकलाई सोच्न बाध्य बनायो । अबको पुस्ताको मान्छेले कसरी खान्छ ? कसरी सास कसरी लिन्छ ? किनभने वातावरण परिवर्तन हुँदैछ, खाने र पिउनेको अनिकाल स्पष्टसँग महसुस गर्न सकिन्छ । त्यसो भए भोलि मानिस हुँदैन त ?
यदि वातावरण परिवर्तनसँगै यो सबै हुँदैन भने, के भविष्यको मानव पुस्तक सुपरहीरो जस्तै हुनेछ। टेक्नोलोजीले चल्न रोवट जस्तै हुन्छ त ? यस्ता विचारहरु पैदा हुन थाले । त्यसपछि वैज्ञानिकहरुले यो बारेमा खोजी गर्न थाले । हामीसँग भविष्यको बारेमा जति धेरै कल्पनाहरू छन् हामीसँग विगतको बारेमापनि धेरै सम्झना सुरक्षिछ छन् । यही तथ्यमा रहेर वैज्ञानिकहरूले धेरै रहस्यहरू समाधान गरेका छन्।
यस्तो अवस्थामा, विश्वले आशा गरिरहेको छ कि यसले भोली पनि एक तस्वीर प्राप्त गर्न सक्छ। राम्रो कुरा यो हो कि वैज्ञानिकहरूले पनि यस दिशामा काम गर्न थालेका छन्। विश्वको विभिन्न कुनाहरूमा भविष्यका मानव व्यक्तिका बिभिन्न चित्रहरू देखा पर्दै छन् ? यस्तो अवस्थामा मानिसको भविष्यको यात्रामा हिंड्नु चाखलाग्दो हुनेछ। यसैले उनीहरुले दावी गरेका छन् की अबका भावी पुस्ताहरु समयसँग यात्रा गर्न सक्ने तहसम्म पुग्छन् ।
यो भनिन्छ कि भविष्यका प्रश्नहरूको उत्तरहरू भूतकाललाई पछ्याएर फेला पार्न सकिन्छ। त्यसकारण धेरै जसो वैज्ञानिकहरूले भूतका नतिजाहरूको आधारमा भविष्य सिद्धान्त दिइरहेका छन्। मानव पुर्खाहरू होमो सेपियन्स थिए, तर करोडौं वर्ष पहिले भिन्न प्रजाति होमो कोलिन्स थियो, जुन लगभग मानव जस्तो थियो भनेर विगतमा वैज्ञानिकहरुले दावी गरेका छन् ।
मानव संरचना समय र आवश्यकता अनुसार फरक थियो भनेर स्वीकार गरेका छन् । मानिसहरूले आगोको खोजी गर्न थाले, पानीको प्रयोग, उत्पादन गर्न, लुगाफाटा बनाउन र फेरि खेती गर्न पनि सिक्दै गए। त्यो भन्दा अघि हाम्रो खानपान र हाम्रो शरीरको बनावट विलकुल बेग्लै थियो । फेरी कुराहरु रित्तिदै जाने हो भने मानिसमा परिवर्तन आउँलैन छ ? बैज्ञानिकको यो तथ्यमा धेरै सहमत छन् ।
विकास विकासवादको सब भन्दा ठूलो ज्ञान हो, चार्ल्स डार्विन विश्वास गर्दछन् प्रकृतिले जहिले शक्तिशालीलाई रोज्छ। केवल शक्तिशाली मात्र बाँच्न सक्छन् । यो नियम हो। आज हामीले देखेको मानव। उसले चुनौतीहरूको सामना गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । उसको अस्तित्व बचाईयो र प्रगति गर्दै गयो भने फेरी अर्को रुप अवश्य बन्छ ।
डार्विन भन्छन् भविष्यमा पनि त्यस्तै हुनेछ। यद्यपि वातावरणमा सबै प्रकारका परिवर्तनहरू आउँदैछन्। तर आउँदो जातहरूले यसका लागि आफूलाई तयार राख्नेछन् । विज्ञानले तिनीहरूलाई यस काममा मद्दत गर्दछ। यसैले अबको विज्ञानले मानिसलाई समयसँगै यात्रा गर्ने बनाउँछ । चाहेमा अवतार परिवर्तन गर्ने । एक क्लिकमा युवा बृद्ध बन्ने । बालक अर्को क्लिकमा युवा बन्ने । यसैले मृत्यु भन्ने चीज अब सामान्य हुनेछ ।
हिन्दू धर्म र टाइम ट्राभलको रहस्य जान्नुहोस्
समय मिसिन गतिसँग सम्बन्धित छ। मानिस समय सीमा पार गरेर विगत र भविष्यमा पुग्न कल्पना गर्दैछ। भारतमा धेरै सन्तहरू छन्, जसले विगत र भविष्यको आँखा बन्द गरेर हेर्ने गर्थे। पौराणिक कथाका अनुसार देवताहरू एउटा ग्रहबाट अर्को ग्रहमा जान्छन् र एक समयदेखि अर्कोमा जान्छन्। अब प्रश्न छ, यो काम मेशिनले कसरी गर्ने ?
सन् १८९५ मा, प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक हर्बर्ट जर्ज वेल्सले द टाइम मेशीन भन्ने उपन्यास प्रकाशित गरे, सारा यूरोप त्रासमा परेको थियो। यस उपन्यासमा वेल्सले अचम्मैको टाइम मेशिन बनाए।
यो उनको कल्पनाशक्तिहरुका आविष्कारहरु मध्ये एक हो जुन विज्ञान लेखकहरूले आज सम्म विश्वभरि प्रयोग गर्दैछन्। उपन्यासबाट प्रेरित भएर यस विषयमा धेरै अन्य प्रकारका मिथ्या कुरा लेखिएका थिए। हलिउडमा एक फिल्म पनि यस अवधारणामा बनेको थियो। यद्यपि वेल्सको उपन्यासमा व्यावहारिक रूपमा धेरै विसंगतहरू छन्।
समय मेशीन अझै एक कल्पना हो। समय यात्रा र समय मेशीन, यो एक उपकरणको इमेजरी हो जसमा कुनै पनि मानिस आफ्नो पूर्ण मानसिक र शारीरिक क्षमताको साथ कुनै पनि समयमा विगत वा भविष्यमा बस्न सक्दछ।
अधिकांश वैज्ञानिकहरू विश्वास गर्छन् कि यो कल्पना कुनै समय वास्तविकतामा परिणत हुन सक्छ, किनकि यो विवादास्पद भएपनि सम्भव देखिन्छ । तर प्रश्न छ मानिस कसरी विगत वा भविष्यमा जान्छ र विगत वा भविष्यको सत्यता थाहा हुन्छ कुन शक्तिले यस्तो गर्न सक्छ ? जस्तो कि भविष्यबाट आउने कसैले तपाईंलाई तपाइँको नाति वा विगतका मान्छे हो र भन्दछन् कि उहाँ तिम्रो हजुरबुबा हुनुहुन्छ, जुन सम्भव छैन।
वैज्ञानिकहरू भन्छन् कि तर वास्तवमा यो घटनाको दृश्य र आवाज ब्रह्माण्डमा अवश्य हुनेछ। तपाईंले फिल्म हेर्ने तरिका, यो समय मेशिन मार्फत देखा पर्नेछ। जस्तो कि फिल्मको चक्का पछाडी लग्यो भने विगत आउँछ । अगाडी कुदायो भने भविष्य आउँछ ।
ब्रमाण्डमा भएको उसको विगत र भविष्यको कल्पनालाई जोड्न सक्ने टाईम मेसिन बन्यो भने अवश्य मानिस त्यस्तो हुन्छ । केही बैज्ञानिकले यो असम्भव नभएको र भावी पुस्तामा नै यो आउँने दावी गरेका छन् । सबै कार्य र कारणको श्रृंखलामा बाँधिएका छन्।
यद्यपि विद्वानहरू पनि विश्वास गर्छन् कि भविष्यलाई थाहा पाएर भविष्यलाई केहि सुधार गरेर परिवर्तन गर्न सकिन्छ, तर विगत भने जटिल छ । हेरौ विज्ञानले के उपहार दिने हो । त्यो भने हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ । BBC